IDOZI OHERE NDỊ ỌBỊA NA-EGBOCHI MGBACHI NA WINDOWS 10 - ADỤ
Idozi Ohere ndị ọbịa na-egbochi Mgbachi na Windows 10
Idozi Ohere ndị ọbịa na-egbochi Imechi na Windows 10: Ọ bụrụ n ’ịkwalite Windows 10 na nso nso a ma ọ bụ melite Windows gị mgbe ahụ ị nwere ike iche nsogbu mgbe ị gbalịrị imechi PC gị ma ozi ezighi ezi na - apụta Ohere Ndị ọbịa Task: Imechi ngwa 1 na imechi (Iji laghachi ma chekwaa ọrụ gị, pịa Kagbuo ma mechaa ihe ịkwesịrị). Onye Ọrụ Task na-akwụsị ọrụ ndị ndabere .
Taskhosthost.exe bụ Task Host nke bụ Usoro Nlekọta Ndị Nlekọta maka Windows 10. Mgbe ị mechiri PC gị, mgbe ahụ ngwanrọ niile na-agba ọsọ ugbu a kwesịrị imechi otu n'otu mana mgbe ụfọdụ, ngwanrọ nwere ike ịkwụsị ma yabụ ị enweghị ike imechi. N'ụzọ bụ isi, ọrụ nke Task Host usoro bụ ịkwụsị usoro mmechi iji chọpụta ma emechiri mmemme niile na-agba ọsọ iji zere ịlafu data ọ bụla.
Onye ọrụ Task bụ usoro ọnụọgụ nke na-eme dị ka onye ọbịa maka usoro ndị na-esite na DLLs karịa EXE. Otu ihe atụ nke a ga-abụ faịlụ Okwu ma ọ bụ Windows Media Player ga-emeghe ma ka ị na-anwa imechi PC ahụ, windo ọrụ ahụ ga-egbochi mmechi ahụ ma ị ga-ahụ ozi njehie ahụ. Ya mere na-enweghị igbu oge ọ bụla ka anyị hụ otu esi edozi Idozi windo ndị ọbịa na-egbochi imechi na Windows 10 site n'enyemaka nke usoro ndị edepụtara n'okpuru.
Method 1: Gbanyụọ mmalite mmalite
Usoro 2: Gbaa nsogbu nsogbu nsogbu
Method 3: Malite PC gị na Nchekwa na ọnọdụ
Usoro 4: Mee buut dị ọcha
5zọ 5: Gbaa SFC na DISM
Method 6: Dezie WaitToKillServiceTimeout
Usoro 7: Gbanwee Ntọala Akaụntụ
Usoro 8: Gbaa mbọ hụ na Windows dị ọhụrụ
Usoro 9: Gbaa CCleaner na Malwarebytes
Usoro 10: Mepụta Akaụntụ Onye Ọrụ Ọhụrụ
Gbaa mbọ hụ na ike weghachi ebe , ọ bụrụ na ihe agahie.
1.Pịa Windows Key + R pịnye njikwa na kụrụ Tinye imeghe Ogwe njikwa.
2.Pịa na Akụrụngwa na .da wee pịa Nhọrọ ike .
3.Mgbe si ekpe window ebi ndụ họrọ Họrọ ihe bọtịnụ ike na-eme.
4. Ugbu a pịa na Gbanwee ntọala ndị na-adịghịzi adị.
5. Uncheck Tụgharịa na mmalite mmalite wee pịa Chekwaa mgbanwe.
1. troublesdị nchọpụta nsogbu na Windows Search mmanya wee pịa Nchọpụta nsogbu.
2.Next, si n'aka ekpe window ebi ndụ họrọ Lelee ha niile.
3.Mgbe ahụ na Troubleshoot kọmputa nsogbu ndepụta họrọ Ike.
4. Soro na ihuenyo ntụziaka ka Power Nchọpụta nsogbu na-agba ọsọ.
5.Rụgharịa PC gị mgbe usoro ahụ zuru ezu ma lelee ma ọ bụrụ na ị nwere ike Idozi Ohere Ndị ọbịa nke windo Na-egbochi Mechie na Windows 10 Nke.
Ozugbo PC gị buut n'ime Nchekwa na ọnọdụ , gbalịa na-agba ọsọ na ngwa nke ị na-adịkarị na-agba ọsọ na-eji ha maka nkeji ole na ole mgbe ahụ gbalịa gbanyụọ PC gị. Ọ bụrụ na ị na-enwe ike imechi ndị PC na-enweghị ihe ọ bụla njehie mgbe ahụ nke na-kpatara n'ihi na nke a ogu na-atọ ndị ọzọ ngwa.
Mgbe ụfọdụ ngwanrọ nke atọ nwere ike imegide sistemụ yabụ nwere ike ibute nsogbu a. Ka ewere Idozi Ohere Ndị ọbịa nke windo Na-egbochi Mgbachi na Windows 10 Issues , i tosiri rụọ buutụ dị ọcha na PC gị ma chọpụta esemokwu ahụ site na nkwụsị.
1.Pịa Windows Key + X wee pịa Iwu ozugbo (Admin).
2.Ugbua puta ihe ndia na cmd ma banye tinye:
3. Chere maka n'elu usoro rụchaa na ozugbo mere Malitegharịa ekwentị gị na PC.
4.Meghe oghe cmd ma pịnye iwu na-esote wee banye banye ọ bụla:
5.Ka iwu DISM na-agba ọsọ ma chere ka ọ gwụ.
6. Ọ bụrụ na iwu ahụ dị n'elu adịghị arụ ọrụ wee gbalịa n'okpuru:
Mara: Dochie C: RepairSource Windows yana ọnọdụ ebe nrụzi gị (Windows Installation or Recovery Disc).
7.Rụgharịa PC gị ka ịchekwaa mgbanwe ma hụ ma ị nwere ike Idozi Ohere ndị ọbịa na-egbochi Mgbachi na Windows 10.
1.Pịa Windows Key + R pịnye regedit na kụrụ Tinye imeghe aha Editor.
2. Gaa na igodo ndekọ ndị a:
HKEY_LOCAL_MACHINE SYSTEM ControlControlSet Njikwa
3.Mee n'aka ịhọrọ Njikwa karịa na windo windo aka nri pịa abụọ WaitToKillServiceTimeout.
4.Gbanwee ọ bara uru 2000 wee pịa OK.
5. Ugbu a ịnyagharịa na-eso ụzọ:
HKEY_CURRENT_USER Ogwe njikwa Desktọpụ
6. Pịa aka na Desktọpụ wee họrọ Ọhụrụ> Uru Eriri . Aha nke a dị ka WaitToKillServiceTimeout.
7.Nwee okpukpu abụọ pịa ya ka ọ gbanwee uru ọ bara 2000 wee pịa OK.
8.Exit ndekọ Editor na reboot ịzọpụta mgbanwe.
Ọ bụrụ na imelite Windows na nso nso a ka ndị okike Fall Update 1709 wee gbanwee ntọala akaụntụ ahụ yiri ka ọ ga-edozi nsogbu ahụ.
1.Pịa Windows Key + M ga-emeghe Ntọala wee pịa Akaụntụ.
2.Mgbe aka ekpe pịa menu Nbanye nhọrọ.
3.Pịgharịa gaa na Nzuzo mgbe ahụ gbanyụọ ma ọ bụ gbanyụọ toggle maka Jiri ozi nnabata m iji mezue mwube m ozugbo m melite ma ọ bụ bidogharịa .
4.Rụgharịa PC gị ka ịchekwaa mgbanwe ma hụ ma ị nwere ike Idozi Ohere Ndị ọbịa nke windo Na-egbochi Mechie na Windows 10 Nke.
1.Pịa Windows Key + M wee họrọ Mmelite & Nche.
2.Next, ọzọ pịa Lelee maka mmelite ma gbaa mbọ wụnye mmelite ọ bụla echere.
3.Mgbe mmelite arụnyere reboot PC gị wee hụ ma ị nwere ike Idozi Ohere Ndị ọbịa nke windo Na-egbochi Mechie na Windows 10 Nke.
1.Download ma wụnye CCleaner & Malwarebytes.
2. Gbaa Malwarebytes ma hapụ ya ka ọ nyochaa usoro gị maka faịlụ ndị na-emerụ ahụ.
3.Ọ bụrụ na achọtara malware ọ ga-ewepụ ha na akpaghị aka.
4. ugbu a na-agba ọsọ CCleaner na ngalaba Cleaner, n'okpuru windo Windows, anyị na-atụ aro ịlele nhọrọ ndị a ka ehicha:
5. Ozugbo ị mere ụfọdụ ihe kwesịrị ekwesị ka enyocha, pịa Gbapụ Cleaner, ma hapụ CCleaner ka ọ gbaa ọsọ ya.
6. Iji hichaa sistemụ gị ọzọ ịhọrọ ndekọ taabụ ma hụ na enyocha ndị na-esonụ:
onye nyocha intaneti intaneti anaghi aza ya
7.Selean Nyocha maka Esemokwu ma hapụ CCleaner ka ianomi, wee pịa Idozi Isiokwu Nhọrọ.
8. mgbe CCleaner jụrụ You chọrọ mgbanwe mgbanwe na ndekọ? họrọ E-eh.
9. Ozugbo nkwado ndabere gị dechara, họrọ Idozi niile ahọrọ Issues.
10.Tụgharịa PC gị iji chekwaa mgbanwe ma hụ ma ị nwere ike Idozi Ohere Ntọala Ohere Na-egbochi Shut na Windows 10 mbipụta.
2.Pịa na Ezinụlọ & ndị ọzọ tab na menu aka ekpe wee pịa Tinye onye ozo na PC a n'okpuru ndị ọzọ.
3.Pịa Enweghị m ozi ịbanye onye a na ala.
4.Họrọ Tinye onye ọrụ na-enweghị akaụntụ Microsoft na ala.
5.Ha pịnye aha njirimara na paswọọdụ maka akaụntụ ọhụrụ wee pịa Ọzọ.
Ọ bụ ya na ị nwere ihe ịga nke ọma Idozi Ohere ndị ọbịa na-egbochi Mgbachi na Windows 10 ma ọ bụrụ na ị ka nwere ajụjụ ọ bụla gbasara ntuziaka a wee nweere onwe gị ịjụ ha na ngalaba nkọwa.
rapaara na windo ihuenyo windo 10
windo 10 kwalite oyi kpọnwụrụ na 99
gịnị mere kọmputa m jiri malitegharia windo 10
netflix na-arụ ọrụ na kọmputa
iTunes enweghị ike jikọọ na ipad a njehie amaghi ama mere 0xe800002d